3-da Maarso ee Adduunka ayaa lagu dhawaaqay - Maarso Adduunka
Bogga ugu weyn » Noticias » Qoraalada saxaafadda » 3da Maarso adduunka ayaa lagu dhawaaqay
3da Maarso ee Adduunka ee sanadka 2024 waxaa looga dhawaaqay Madasha Xadgudubka ee Mar del Plata - Argentina
Dabaaldeggii 10 guuradii oo ka mid ah Toddobaadka loogu talagalay Rabshadaha Mar del Plata wadid Osvaldo Bocero y Karina Freira halkaas oo dhaqdhaqaaqayaasha ka socda in ka badan 20 dal oo ka mid ah America, Europa y Afrika.
Waxaa jira Rafael de la Rubia toos looga dhawaaqay Madrid in ee 2024 ah 3ª Aduunka March ee loogu talagalay Nabadda iyo Dagaalka.
El Madasha ku saabsan Rabshadaha Waxay ku bilaabantay xaflad yar oo qiiro leh oo codsi nabadeed adduunka oo saddex luqadood ah: Español, Portuguese y guarani. Waxay ahayd daqiiqado yar oo feker ah iyo isku xirnaanta kaqeybgalayaasha.
Osvaldo wuxuu soo bandhigay waxqabadka iyo horumarka waxa kubilaabay a Toddobaadka loogu talagalay Rabshadaha gudahood 1ª World March gudaha 2009 iyo sida ay ku talaabsatay 10-kaas sano. Dukumiinti kooban oo kooban ayaa lagu soo bandhigay sawirrada safarkaas.
Waxaan dib u soo saarnaa qaar ka mid ah soo jeedimahaas Rafael de la Rubia, afhayeenka World March, ayaa lagu yiri khudbadiisa:
"Is Toddobaadka Rabshadaha Waa tusaale joogto ah 10 sano, oo u adeegta sidii waxyi. Waa hawsha joogtada ah ee hawsha socota, taas oo ina tusaysa jidka iyo horumarka.
Eray aan rabshad lahayn:
Maanta waxaan dooneynaa inaan kaqeyb galno ereyga rabshad la'aan
Horaantii Febraayo 2016, ee Madasha Peña Blanca (Honduras), ururka aadanaha MSGySV waxay bilaabeen olole loogu soo daray ereyga rabshad la’aan qaamuuska Akadeemiyadaha Luqadda Isbaanishka.
Waxay ku saabsan tahay fidinta ficilkan luqadaha kale ee aan eraygu midna lahayn. Rabshadaha ku dhaca Ruushka ayaa la sheegay ненасилие, Czech waa nenásilí, af Jarmal gewaltlosigkeit, gudaha italian nonviolenza iyo Ingiriisi rabshad la'aan, laakiin Isbaanishka ma jiro.
Ereyga in lagu daro qaamuuska luuqada Isbaanishka, waa in la diiwaangeliyo in si caadi ah loo isticmaalo, tani waa sida ka mid noqoshada suurtagalka ah ay u shaqeyso. Sidaa darteed wakiillada bulshada ayay ku xiran tahay inay shaqeeyaan si markaas isticmaalkiisa loo wada dhigo iyo in macnaheeda la mideeyo oo laga fahmo dhammaan meelaha looga hadlo Isbaanishka.
Waxaan ka faa'iideysanaa Maalinta Rabshadaha si loogu casuumo in loo isticmaalo hal eray, wada jir iyo bilaa xaraf, sidaa darteed waxaan ku heli karnaa ereyga rasmiga ah luuqada Isbaanishka. Aynu iska kaashanno sidii loo faafin lahaa isticmaalkiisa iyo, si aan ula siino hay'ad erey-fure u ah xilli bulsho cusub.
Bandhigga Filimka Xadgudubka: Maanta waxaa bilaabanaya Bandhiggan Caalamiga ah ee 3-da maalmood soconaya ee ay dhiirrigelisay FICNOVA.
Badda Nabadda ee Badda Dhexe: Ololaha ayaa ka bilaabmay 2ª World March taasi waxay damacsan tahay inay bedesho Baddweynta dhexdeeda oo ah bad nabadeed, kulan dhaqameed oo ka xor ah hubka nukliyeerka.
- Buug-gacmeedka kan Tafatiraha Saure. 100 bog. Waxay soo bixi doontaa toddobaadyo yar gudahood. In luqadaha Isbaanishka iyo Basque. Daabacaadda luqado kale ayaa la filayaa.
- Buugga Xoghaynta Nobel Peace Prize: Ayaa la weydiiyay MSGySV qor cutubka ku saabsan rabshadaha. Waa inaan gaarsiinaa bisha Diseembar ee sanadkan.
-Buugga 2-aad MM. Waxaan la jirnaa waxyaabaha ku jira iyo golaha. Macluumaadka ayaa wali ka maqan meelaha qaar.
Waxaan ka fiirsaneynaa sugida waxyar iyo in aan banaanka u soo baxno markii TPAN. Xaaladdaas oo kale waxaan ku dari lahayn cutub gaar ah oo ku saabsan mawduucaas.
Waxqabadyada soo socda
- Waxaan ka shaqeyneynaa qabashada Bandhig faneed ee muwaaddiniinta adduunka oo dulucdiisu tahay TPAN si loogu dabaaldego markii ay ku dhawaaqday dhaqan galkeeda Qaramada Midoobay. Waxaan xisaabineynaa bilowga sanadka 2021.
- Waxaan ka qayb qaadan doonnaa Maarso Nabadda Perugia - Assisi Oktoobar 10.
- Shirka Caalamiga ah: In Geneva dhamaadka Oktoobar, Xoghaynta Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ayaa casuumay MSGySV si wadajir ah u dhex galaan 4 hay'adood oo caalami ah, si dhalinyarada ka socota ururadan ay u soo bandhigaan soo jeedintooda, mashaariicdooda iyo waxqabadyadooda.
- Madasha Gobolka ee Nabadda Latin America socod ah 2021 uu wado Abaalmarinta Nabadda ee Nobel iyadoo ay taageerayaan magaalada Merida-Mexico iyo 9 jaamacadood oo kuyaala gobolka Maya. Jidhkeena sidoo kale waa la casuumay MSGySV.
-3aad World March
-Waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqeynaa taas 3ª MM wuxuu bilaaban doonaa Oktoobar 2, 2024
-La mid ah 2ª MM waxay ka bilaaban doontaa kuna dhammaan doontaa isla magaaladaas ka dib markuu meeraha meeraysto.
-Waxaa lagu dari doonaa dalxiisyada gobollada sida: Koonfurta Ameerika Maarso, Badhtamaha Ameerika, Maarso Badda Nabadda ee Badda Dhexe y Latin Amerika Maarso. Waxaan rajeyneynaa inay jiri doonaan kuwa kale oo kusoo biiri doona. Waxaan rajeyneynaa inaan qabano socod aqoonsi ah dhamaan qaaradaha.
-Waxa kale oo lagu darayaa qaabka dalxiis ee dalxiiska, si loo siiyo kaqeybgalka ugu weyn ee suurtogalka ah kuwa xiiseynaya.
Kalandarka 3aad ee Adduunka XNUMXaad
21/6/2021, saldhigyada waxaa loo ogaan doonaa magaalooyinka inay dalbadaan 3da MM 2024.
-Magaalooyinka tartamaya ayaa arjigooda u diri doona 21/6/2022.
-2/10/2022 waxaa lagu dhawaaqi doonaa halka 3-da MM uu ka bilaaban doono / dhamaadka.
-2/10/2024 bilowga Dunida 3aad Maarso.
Laga soo bilaabo Kooxda Iskuxirka Caalamiga ee MSGySV Waxaa la igu wargaliyay in bishaan Oktoobar tirakoobka cusub ee xubinimada la qaban doono ka dibna doorashooyinka kooxda cusub ee isuduwidda caalamiga ay dhici doonaan. Waxaan markaa kugu martiqaadeynaa inaad kaqeyb gasho oo aad ku soo biirto Dunida la'aan Warsame iyo Rabshad.
Wax intaas dhaafsiisan, aad baad u mahadsantahay…
Waxaan uga mahadcelineynaa Liz Vasquez tarjumaadda Ingiriisiga ee maqaalkan.